‘महिला रोकिए संसार रोकिन्छ’ छोला त यसले भूइँमान्छेलाई ?
देवी काफ्ले | फागुन ३०, २०७६ शुक्रबार | 0
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका नारा लागे । कार्यक्रम भए । ‘महिला रोकिए संसार रोकिन्छ’ जस्ता सुन्दैमा पनि स्त्री हुनुमा गौरवबोध हुने शब्द वाक्यले आकाश गुन्जायमान थियो । यताउता कपिलवस्तुमा एसिड प्रहारबाट महिला घाइते भइन् । निहुँ ठूलो होइन, सामान्य क्रिकेटको ब्याट भाँचिएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस नेपालमा मनाउन थालिएको छ, दशक भइसक्यो । यो दिवसले श्रमिक महिलाहरुलाई मात्र इंगित गर्छ कि अन्य शोषित पीडित महिलाहरुलाई पनि ? प्रश्नको जवाफको खोजीमा छु म ।
यदि श्रमिक महिलाहरुलाई मात्र इंंगित गर्ने हो भने पनि वास्तविक श्रमिक महिलासामु यो दिवस पुग्यो कि पुगेन ? पुगेको भए श्रम बराबर भए पनि ज्याला किन कम हुन्छ महिलाको लागि ?
शहरमा केही स्वतन्त्र अनि शिक्षित महिलाहरु, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुले पाँचतारे होटलभित्र ठोकिएका खरा भाषण खोलातिरमा गिट्टी कुट्ने, इट्टाभटामा नानी बोकेर मजदुरी गर्ने, निर्माणस्थलमा पिठ्युमा नानी बोकेर टाउकोमा उठाएको बोझसँगै जीविकोपार्जन गर्ने महिलाहरुका कानमा पुग्यो कि पुगेन ?
यदि सबै क्षेत्रमा पीडित महिलाको लागि पनि इंंगित गर्छ भने गाउँमा दुःखजिलो गरेर जीविका चलाउँदै गरेकी असहाय, झुम्री, कुरुप आमाहरुलाई बोक्सीको आरोप लगाएर गाउँ निकाला गर्ने भद्रहरुले किन सुनेनन् ?
६ महिने बालिकादेखि ७७ बर्षीया बृद्धा आमा बलात्कृत हुन्छिन् । अपराधी खुलेआम घुम्छन् । यी पीडितको लागि यो दिवसले छोएको छ ?
निर्मला त प्रतिनिधि पात्र हुन् । त्यस्ता अबोध कोपिला यहाँ कति निमोठिएका छन् ? तिनीहरुको लागि यो दिवसले छोयो कि छोएन ?
दाइजो थप नपाउँदा बच्चाकी आमा, नयाँ बुहारी अक्सर मट्टीतेलमा दन्केका छन् । तिनलाई छुने कि नछुने ?
खुलेआम छोरीबेटी कोठीमा नगद लिएर सीमा कटाउँदै मुम्बईका कोठीमा वेश्यावृत्तिका लागि बिक्री हुन्छन् । तिनका लागि कुन दिवस मनाउने ?
एकोहोरो प्रेमको नाटक गरेर आफूलाई जबरजस्ती मन पराऊ भन्ने र अस्वीकार गरेमा एसिड छ्यापेर जिन्दगी लुटिएका छोरीहरुको लागि कुन दिवसले छोला ?
आमाको गर्भमा रहनासाथ भ्रूण परीक्षण गरी छोरी भए गर्भपतन गराइन्छ । यस धर्तीमा टेक्न नपाई उनको जिउने हक लुटिन्छ । ती छोरी भ्रूणहरुका लागि कुन दिवसले बाँच्न पाउने अधिकारका लागि बोली देला ?
रजस्वला हुँदा घरमा बास दिँदा देवता रिसाउने र सामाजिक बहिष्कार हुने डरले असुरक्षित छाउगोठमा बसेर ज्यान गुमाउने युवतीका लागि यस्ता दिवसले कस्तो सन्देश दिएको छ खोइ ?
यस्ता प्रश्नका थुप्रा कति छन् कति ? जवाफ कतै भेटिदैन । भेटियो भने पनि उनै महिलामाथि धर्म, संस्कार, रीतिरिवाज, परम्परा, चरित्रहीनता, पूर्वजन्मको खेल भनेर पन्छाइन्छ ।
मेरो आशय दिवस नमनाउने भनेको होइन । कि दिवसको मुख्य सार असली पीडितसामु पुगोस र अधिकारबारे जानकार होऊन् । अपराधबिरुद्ध लड्न सकून् । हो, यस्ता कार्यक्रमहरु कुनै होटलका बन्द कोठाभित्र होइन तथापि त्यस्ता ठाउँमा पुगून् जहाँ ती संघर्षशील महिलाहरु जोखिममा छन् । जसलाई अन्यायको बिरुद्ध बोल्नु पाप लाग्छ भन्ने डरले थिचिएका छन् । जो अन्यायको विरोध हैन कि अत्याचार सहनु हाम्रो धर्म हो, कर्तव्य हो भन्ने ठान्छन् ।
ती ठाउँहरुमा यो दिवस पुगोस्, जहाँ अशिक्षाको कारण वर्षेनी सुत्केरी हुन्छन् । न आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षित छ, न बच्चाको । बच्चा जन्माउन नसकेर अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । ती ठाउँहरुमा पुगोस्, जहाँ आर्थिक उपार्जनका लागि महिलाको शरीरको बजारीकरण हुन्छ । जहाँका चेलीहरु अशिक्षाका कारण अर्काको ललाईफकाईमा परेर वेश्यालयमा बेचिन बाध्य छन् ।
यो दिवस त्यहा पुगोस् र यस्तो सन्देश देओस् कि महिला दाइजोरुपी वस्तुसँग जोखिनु पर्ने कुनै बस्तु होइन भन्ने बुझून् । सुदूर पश्चिममा भत्केका खर र माटोद्वारा निर्मित छाउगोठले त्यहाँका युवतीले पार पाएका छैनन् । त्स्ता ठाउँमा पुगोस् अनि जनजनका मनभित्र विराजित छाउगोठ भत्काउन मद्दत गरोस् ।
त्यस्ता ठाउँमा जाओस् यो दिवस कि भित्री सुन्दरता भए पनि बाहिर कुरुप देखिने, गरिब, असहाय, विधवा महिलालाई बोक्सी होइन एउटी सशक्त नारी बन्न प्रेरित गरोस् । बिना कारण बोक्सी बनाउने अपराधीका लागि सशक्तरुपमा लड्न सक्षम बनाओस् । ती बाआमालाई सन्देश दिन सकोस कि जसले भ्रूण परीक्षण गरी नजन्मेकी छोरीको हत्या कति गलत छ ?
समग्रमा वास्तविक श्रमिक, शोषित पीडित महिलामाझ पुगेर यो दिवस मनाइदिए केही उपलब्धि हासिल होला नत्र दशकौंसम्म पनि नाराजुलुसमा सीमित रहने छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको ढिलै भए पनि शुभकामना !